शंकर पोखरेलले मधेशको बारेमा दिएको विवादस्पद टिप्पणीमा आलोचनाको बाढ | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » शंकर पोखरेलले मधेशको बारेमा दिएको विवादस्पद टिप्पणीमा आलोचनाको बाढ
शंकर पोखरेलले मधेशको बारेमा दिएको विवादस्पद टिप्पणीमा आलोचनाको बाढ
saharatimes Tuesday, September 6, 2016 1 No comments
काठमाडौ भदौ २१ गते । एमालेका नेता शंकर पोखरेलले मधेशको बारेमा आज विहान आफ्नो ट्वीटरमा गरेको टिप्पणी विवादस्पद भएको छ ।
अहिलेको उहाँको विरोधमा ट्वीटरदेखि फेसबुकसम्म आलोचना भइरहेको छ । कसैले पागल भएको भन्छन् त कसैले मति विग्रेको पनि भनेका छन् । उहाँको आलोचना फेसबुकमा भाइरल भएको छ । फेसबुकमा उहाँका बारेमा आएका आलोचनात्मका टिप्पणी यस्तो छ ।
कहिले ओलीको माखेसाङ्लो । कहिले झलनाथको धोती प्रदेश । कहिले शंकरको कालो दिवस । एमाले नेताहरुको अवचेतनमा के छ भन्ने बुझ्न यी तीन उदाहरण काफी छन् । मधेसबाट एमाले एक्लैले ३७ सिट प्रत्यक्षमा जितेको छ । मधेसवादी सबैको जोड्दा ११ सिटमात्रै । तर एमालेले किन देखिनसहेको आफ्नै मतदाताहरुलाई ?
वास्तवमा एमालेले देशमा शान्ति,संधियता नचाहेको प्रष्ट भएको छ।देशमा नयाँ संविधान आईसकेपछि मधेश आंदोलन पश्चात उक्त संविधानको बारेमा छलफल भई अपूरो र केही कुरा गलत भएको ठम्याई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाली अहिलेको सरकारले संशोधन तिर अधि बढिरहदा र संघियता लाई पूर्ण रूपले बटमलाईन मानिरहदा आज शंकर पोखरेल को जुन किसिमले tweet मार्फत बिचार आयो त्यो अति नै अप्रिय,अमानविय,संघियता विरोधी,द्वन्द फैलाउने,शान्ति भड्काउने,जातिय नरसंहार गराउने किसिमको रहेको हाम्रो ठहर रहेको छ।अहिलेको समयमा आएर यस्तो किसिमको भडकाउ बिचार दिने र हिंसा फैलाउन खोज्ने जो कोही आतंकवाद भन्दा कम नभएको हामी ठानेका छौ।यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिने शंकर पोखरेललाई देसद्रोहको मुद्दा चलाई आउने दिनमा अरूलाई सचेत गराउन सरकार संग माग गर्दछु।
कालो मधेसी र शंकर पोखरेल:
भगवान श्री कृष्ण काला थिए गोरा कंश कौरवको नाश गरे र गीताको रचना गरी मानवलाई मार्ग प्रशस्त गरे । कालो मधेशमा जन्मेका सिध्दार्थ बुद्धले संसारमा दिव्य प्रकाश दिए । सगरमाथाको कालो चट्टानले सेतो हिउलाई सहारा दिएको छ । कालो कोईलाले उर्जा दिन्छ । कालो नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रीकी विभेदकारी गोरालाई सुरक्षा दिए । कालो अमेरिकी मार्टिन लुथर किड़ले आफ्नो ज्यान बलिदान गरी समानताको लागि लड़े । कालो माइकल ज्याकसनले विश्व नृत्यकलामा नयाॅ अविस्कार गरे । कालो पेले मोहम्मद अली लगायत अनेकौं काला खेलाडी खेल जगतका चम्किला तारा छन् । कालो शनीले दुष्टको नाश गर्छन् । काला मधेसीको मधेश बिना समृद्ध नेपाल कठिन छ । त्यसैले कालो मधेसीको सम्मान गरी नेपालको शिर उच्च गरौं । सबैको जय होस !
शंकर जस्ता पोथी हामी भाले
ए माले , हो हामि छौ काले
त चाहि को ?
पोथी कि भाले !
काका तिम्रा ओली , हावामै तिर फाले
शंकर जस्ता पनि बनेछ आज पाले !
ए माले माले माले , किन बौलाउन थाले ,
बिदेशी प्रयोग पछि तिमीलाई यता पो फाले !!
हामि कालो भएनी दिल कालो छैन ,
तिमि गोरा कसरि मनै सफा छैन !
बिचार गर , होश पुर्याउ , लेख्ने बोल्ने बेलामा ,
दशा लाग्छ न भए , जान्छौ गोरेको ( बिदेशी ) खोलामा !
एमाले माले माले
तिम्रा पुस्ता पनि मनको काले
हामी अहिले पनि स्वक्ष ,
तिमी सधै मन मष्तिस्कले काले !
एमाले भित्र भएका सून हौ हाम्रा काले ,
लाज भए आउ यता ,
शंकरले प्रश्न निधार मै टाले !!!
चाप्लुसी छोड़ अब , इनी बढीनै बोल्न थाले ,
हेराउनु पर्छ इनिलाई , इनी पोथी हामी भाले !!!!
एमाले सम्बद्ध मधेसी नेताहरुसंग सवाल तपाईहरु काला हो कि गोरा ?गोरा जति शंकर कमरेडको पक्षमा लाग्नु होला । कालाजति आफ्नो आत्माले भनेको गर्नु होला । शंकर कमरेडले मधेसीलाई काला भनेर होच्याएको मन परेको छ भन्ने केही भननु छैन अन्यता एक शब्द आफ्ना नेताजीसग अवश्य सोध्नु होला
हो शंकर भैया, हाम्रो वर्ण कालो छ । के हाम्रो वर्ण कालो हुनु अभिश्राफ हो ! शंकर भैया, हाम्रो वर्ण हाम्रो आफ्नै हो मधेसको माटोको रङ्ग सङ्ग मिल्छ, त्यसैले हामी धर्तीपुत्र हौ र त हाम्रो वर्ण पनि कालो छ तर मन कालो छैन, मन त सफा छ । तर शंकर भैया हजुर र हजुरको पार्टी चाहिँ किन बहुलाएको, किन गोरा पहाडी बाहुन नस्लवादि भएको, पार्टीलाइ किन पहाडी बाहुन गोराहरुका मात्र बनाउन खोजिएको हो, कालो मधेसीलाई किन यति हेपेको, बहिष्कृत गरेको हजुरहरुको नश्लवादी चिन्तनलाई बुझ्ने कसरी ? तर यस्तै चिन्तनमा अधरित भएरै हजुरहरुले बनएको संविधान त मान्दै मान्दैनौं असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा पनि मनाउने छौ, यसबाट कसैको मानसिक बिचलन भए दुखित छौ !!
कामरेड शंकर पोखरेल तुम और तुम जैसा नेताओं को मेंटलु चेकअप कराना चाहिए, क्यूकी मनोदशा ठीक नहीं है। और मधेशी नेता और मधेशी अधिकारबादीके मेरा प्रश्न है अगर मधेशी जनताके हकहित मे काम करते हो तो ए कामरेडको ईट जवाफ पथरो से दो ।
थुक्क एमालेका नेता शंकर पोखरेल मधेसीलाई कालो भनेर अपमानित गरेर फेरि आफनो उचो स्वरमा बोल्न थालेका छन। विवादित टयुट हटाएर फेरि लाजमर्दो कुरा लेखेका छन –‘कालोलाई विरोधको प्रतिक वनाउने कुरा रंगभेदवादी युरोपिय चिन्तन परम्परासंग जोडिएको अर्थमा त्यसको विरोध गरेको हू । गलत अर्थ लगाए पछि हटाएको हू ।’तर आफनै नेता मदन भण्डारीको हत्या गर्नेहरुलाई पुरष्कृत गर्नेहरु विषयमा किन बोल्दैन । यीनीहरु पागल हुन पागलको उपचार कित विद्युतीय सर्टबाट गर्नु पर्छ । कित .............
एमाले नेता हमीलाई कालाे भनेकाे छ । हमताे काले हैं ताे दिलवाले हैं । हमारे दिल काला नहि हैं ,लेकिन तुमहारे दिल ताे ईतना काला हैं ।हजार क्यिूनटल साबुन खर्च करेगें ताे भी कोयला ही रहेगें ।
पछिल्लो समय एमाले नेताहरुमा मानसिक विमारीको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैले कहिले कुनै एमाले नेताले मधेशी जनतालाई आँपसंग तुल्ना गर्छन् ,कहिले धोती भन्छन्, कहिले मधेशलाइ राष्टघाती भन्छन् । आज शंकर पोखरेलले अधिकांश मधेशी जनता काला हुन भनेछन् । यसले यिनहरु मनसिक रोगबाट ग्रसित भएको पुष्टि हुन्छ । सरकार हो अव यी मानसिक रोगीहरुको उपचारको लागि बजेट छुटयाऊ हैन भने मधेशीहरुले चन्दै लगाएर दिनु पर्छ भने तयार छन् । तर यिनीहरुलाई मानसिक उपचार गराउन जरुरी छ । मलाई त अर्को शंका पनि लाग्छ कि यी पतितहरुको जन्म विभिन्न समुदायहरु बीचको आपसी सद्भाव र भाइचाराको सम्बन्ध भाड्नैलाई भएको हो की क्या हो ?
एमालेका नेता शंकर पोखरेल जी तपाईहरूलाई मधेशमा फलेको कालो चामल मिठो हुने तर मधेशमा जन्मेका कालो मधेशी मिठो नहुने कीन ? जबसम्म मधेशीलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरि मधेशी माथी उलटै शासन गनुॅ भो तबसम्म पनि ठीक तर आज कालो मधेशीहरूले आफ्नो अधिकारको लागि आफै लडि रहेका बेला कहिले मखि,कहिले धोति त कहिले कालो भनेकै कारण आज समग्र मधेश आन्दोलित छन् ।तपाई ऐमालेका नेताहरूको बिरता मधेशीले पक्कै मागेको हइन आफ्नो अधिकार मात्र मागेको हो ।अझ सच्चिनेबेलाछ नत्र इतिहासको पनामा तपाईहरूको नाम सिमित हूनेछ र बिदेशीको दलाली गनॅ छोडनु भएन भने मधेश र मधेशीले आफ्नो भाग्यको फैसला गनेॅछ ।
के एमाले मा मधेसी छैन????,यो के गर्न र भन्न खोजेको हो shankar.pokhrel ले, वास्तव मा इनिहरु देश टुक्र्याउने खेल मा लागि रहेको छ,नेपाल सरकार लाई अनुरोध यस्तो लाई तुरन्त छानबिन गरि देश द्रोह र हिंसा भड्काउने मुद्दा दर्ता गरि जेल हाल्नु पर्छ।
आदरणीय कामरेड शंकर पोखरेलज्यू, सम्माननीय केपी ओलीज्यूले सुरु गर्नुभएको कालो वर्णका मधेशी जनताको अपमान गर्ने श्रृंखलाकै क्रममा आएको तपाईको यस अभिव्यक्तिप्रति कुनै आग्रह पुर्वाग्रह नराखी तपाईलाई यति मात्र विश्वास दिलाउन चाहन्छौं की यस वर्ष पनि असोज तीनका दिन नेपाल दुई कित्तामा विभाजित हुने नै छ । मधेशी मोर्चाको बारेमा केही भन्नु छैन । नब्बे प्रतिशत मधेशी जनताले गएको वर्ष असोज तीन गते कालो दिवस मनाएकै थिए । यस वर्ष पनि त्यो कालो दिनको सम्झनामा कालो दिवस मनाइने नै छ । यसबाट तपाईजस्ता गैरकालो वर्णका राष्ट्रवादीहरुलाई पर्नजाने असुविधाप्रति हामीलाई खेद छ ।
दिपावली गर्नेले दिप सजाउने तयारी गरुन् । मधेश अहिले आफ्ना सपुतहरुको वर्षीमा शोकमग्न छ । #असोज३कालोदिन
पुर्व संचारमन्त्री समेत रहेका नेता पोखरेलको यस्तो "ट्विटे विचार"लाई कदापि पनि स्वीकार गर्न सक्किन्न !
नेकापा एमाले नेता शांकर पोखरेल आफ़नो मानसिक संतुलन गुमाइ सकेका छन।
डियर नेता शंकर पोखरेल ज्यू,
तपाईले खेलेको शब्द एक पटक आफै पढ्नुस् । तपाइकै नैतिकताले यस्तो कुरा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन उत्तर पाउनु हुन्छ ?
जहाँसम्म मधेशी कालोवर्णको कुरा हो, त्यो सत्य नै रैछ । तर भोट माग्ने बेलामा त्यही कालो मधेशीको खुट्टा ढोक्नपछि पर्दैन सेतावर्णका मानिसहरु । अर्थात् तपाई जस्तो नेताहरुले ।
एमाले नेता शंकर पोखरेल बौलाहा, सनकी र लहडी भएका हुन् ? हे पोखरेल, देशलाई विभाजित बनाउने विषवृक्ष नरोप ! र, कालो वर्णका मधेशीहरु, अब कति पोखरेल ‘मालिक’ हरुको पार्टीमा हलिया, कमैया, कमलरी बनेर भाँडाकुँडा मस्काउँछौं ?
Mr. Shankar Pokhrel
तपाईलाई समस्याको संग छ- कालो वर्ण भएको मधेशी संग कि मधेशी मोर्चा संग जसले सरकारबाट धपायो! हामीलाई कालो भनेर आफ्नो तुलना कतै गोरे अंग्रेजसंग त् गर्नु भएको छैन!
म यादव कुलबाट हो, यदुवंशी (गोपालवंशी) अर्थात कृष्णवंसज- भगवान श्री कृष्णको वंसज जसलाई 'साँवला' (काले) भनेर पनि चिनिन्छ र तपाई पनि पकै त्येही काले श्री कृष्णको अगाडी हजारो पल्ट ननमस्तक भइ सक्नु भएको होला। एक चोटी अझ जानुस, आफै सब बुझ्न थाल्नु हुन्छ।
यसरी गैर जिम्मेवार Tweet गरेर बन्न लागेको सद्भाव नबिगार्नुस! अनुरोध छ।
संविधानसभाको चुनाव हारेका पोखरेलको मानसिक अवस्था विग्रदै गएको पुष्ठी हुदैछ । जस्को संसकारमा खोट हुन्छ वेला वेलामा यस्तै पागलपन गरि रहन्छ यो उसको गल्ती होइन उनका पुर्खाको कमजोरी हो । हे एमालेका मधेसीयाहरु अव त तिमहरुको आफ्नै दाईले कालो मर्सिया भनिसके अझै लाज लागेन ?
शुरुमा हेर्दा त शंकर पोखरेलले पनि यस्तो गर्न सक्छ भनि विश्वासै लागेन तर मान्छेको मति विग्रेपछि यस्तै हुन्छ, यति टिप्पणी गर्न सक्छु शंकर पोखरेलको बारेमा ।
अब पनि कती गुलामी गर्छौ मधेशी एमालेको जसको नेताको सोंच यस्तो छ...... धिक्कार छ !
तिमी कुकुर पुजा गर्छौ, काग पुजा गर्छौ - तिमी कुकुर की कागको .........
एमाले अध्यक्ष केपी ओली मात्रै पागल होलान भनेको त एमालेका युवादेखि पाकासम्म जम्मै पागल रहेछन् । एमालेको मानसिक रोगी सचिव शंकर पोखरेलको नश्लिय अभिब्यक्तिको जति निंदा गरे पनि कम छ । के यही हो मधेशप्रति एमालेको दृष्टिकोण ? पोखरेलले मधेश र मधेशी जनताको अपमान गरेका छन्, नश्लिय छ, निंदनीय छ । मधेशसँग उनले तत्काल क्षमा माग्नु पर्छ । पोखरेललाई बौद्धिक ठानेको त ऊनि विचारले दरिद्र पो रछन ।
F**k u neta ji
शंकर पोखरेल आफनो ठाउँमा एकदम सही छन्। उनले आफनो गिद्द्द्दी अनुसार कुरा गरेका छन् । यसमा उनको केही छैन। दोष त उनीहरुको हो जसले उनलाई ठूला intellectual नेता मान्दै आएका छन् ।
एमाले नेता शंकर पोखरेलको मानसिक सन्तुलन गुमेको होइन भने एउटा समुदायको अपमान गरेकोमा नैतिकताको आधारमा तत्काल सार्वजनिक क्षमायाचना गरुन् । निर्लज्ज भएर कुतर्क गरेको सुहाएन ।
Laxman mandal September 10, 2016 at 6:11 PM
सतही हेर्दा दोष शंकर पोखरेलको हो तर हैन वालकको संस्कार आफ्ना आमाबाबु र घरको जस्तै हुन्छ त्यसकारण यसमा दोष अभिभावक केपी र घर एमालेकै हो जस्तो सिकायो उस्तै हुने त हो ।